Linux Mint yawana nzira yakanaka yekutikurudzira kusimudzira | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint yawana nzira yakanaka yekutikurudzira kuti tisimudzire pasina kutinetsa zvakanyanya
Chikwata che Linux mint iwe unotora nguva yako kuita zvimwe zvinhu, uye izvo zvinowanzo guma nesarudzo dzakanaka. Mwedzi yakati yapfuura, vakaita nharo zvekuita kuti vakwanise kupa vashandisi vavo iyo Chromium browser vasina kuvamanikidza kuti vashandise iyo Snap vhezheni uye, mushure memavhiki ekukakavadzana, pakupedzisira vakasarudza kuzvinyora ivo pachavo ndokuwedzera kune avo matura. Chinhu chekupedzisira chavanga vachisangana nacho kwemasvondo ndiwo musoro wenyaya, uye unoziva zvavachaite.
Dambudziko, sekutsanangura kwatinoita mwedzi wapera kunyangwe kufunga kuti vanogona kutora matanho akasimba, ndeyekuti vazhinji vashandisi veLinux Mint ivo havana chavanogadziridza chero chinhu. In Tsamba yemwedzi uno Ivo vanotsanangura kuti vakataura nevamwe vavo, uye vazhinji vanopindura zvinhu zvakadaro ndezvekuti ivo havana kumbozvifunga nekuti ivo havana kumbonzwa kudiwa. Mushure mekuvateerera, timu inotungamirwa naClement Lefebvre yakafunga kuti vaive nechikamu chebasa.
Linux Mint icharatidza yambiro, asi haizove isinganzwisisike
Saka nezvose zvataurwa, izvi ndizvo zvatakaita. Isu takagadzira system yekuzivisa iyo inoshanda seyeshamwari uye yekuyeuchidza chiyeuchidzo uye isu taive takangwarira chaizvo kuti tirege kuchinetsa. Kunyangwe ichiratidzira iwo iwo akafanana ruzivo seye tray icon, iyo ziviso inonyanya kuoneka uye inogadzira mukana wekuti mushandisi agamuchire nyore kana kuirasa.
Chaizvoizvo, uye kana ndikarangarira nemazvo, zvakada kufanana nezvinoitwa nemamwe masisitimu anoshanda: ratidza chiziviso chinouya kubva chero kuri nzvimbo yekuzivisa iri (pamusoro repakati muGNOME kana pasi chaipo muPlasma, semuenzaniso) uye kuti isu tinogona kugamuchira kana kuramba nekungodzvanya kamwe chete. Uye zvakare, Linux Mint ichatipa iyo sarudzo yekumisikidza otomatiki meseji mune imwecheteyo ziviso.
Kushambadzira ichaonekwa kana chimwe chinhu chakakosha chisina kuiswa kwemazuva manomwe ekushandisa kana gumi nemashanu ebhizinesi mazuvakunyangwe komputa yadzimwa. Maitiro acho anogona kuchinjwa kubva pazviruva uye woenda pasi kusvika kumazuva maviri kana kukwira kusvika pa2.
Kune kwedu chikamu, isu tinogara tichiita tinokurudzira kuva nemidziyo yakagadziridzwa. Tinogona kupotsa software yekuvandudza kana zvikatifambira zvakanaka, isu tinovimba nazvo uye isu tine hanya neshanduko, asi zvekuchengetedza zvekuchengetedza nguva dzose zviri nani kuisa. Uye muLinux Mint izvi zvino zvave nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint yawana nzira yakanaka yekutikurudzira kuti tisimudzire pasina kutinetsa zvakanyanya
Sezvinobvumwa, pavakasimudza nyaya mwedzi wapera, ndakafunga kuti vaizoshandisa imwe "hasha" sisitimu yekumanikidza vanhu kukwidziridza maPC (uyezve, ndanga ndichifunga kuchinjisa distro kana vanga vachinyanyisa).
Chekupedzisira, ndinofunga mhinduro yakatsanangurwa nechikwata cheLM ine musoro mukutarisa kwekuregeredzwa kwevashandisi kugadzirisa zvigadzirwa zvavo.
Deepin 20.2 inosvika neLinux 5.11, yakavakirwa paDebian 10.8 uye kugadzirisa mukuita uye ruzivo rwevashandisi